I-XJCM brand 6X6 ye-off-road truck ikhwele i-crane isiwe eTurkmenistan
Kule minyaka mithandathu idlulileyo, Ngeenzame zabo bonke abasebenzi beXJCM, sizigqibile zonke iilori ezinyusiweyo zeprojekthi yamandla eTurkmenistan. Olu luyilo olutsha, i-crane match 6X6 Hongyan chassis .Ikhreyikhi inamandla ngakumbi. NgoJan, 24,2021, Sabamba sim ...Funda ngokugqithisileyo »
Iiyunithi ezingama-30 ze-XJCM brand ezingama-25 zeelori zekhonkco zilungile
Abathengi bamanye amazwe baodole iiyunithi ezingama-30 ezingama-25 ton XJCM brand crane truck with Hong Yan chassis on Auguest, 2020. Abasebenzi beXJCM baxakekile kwaye basebenza nzima kule odolo .Ngoku zonke iindawo zilungile .Ivenkile yokuhlanganisana izakuxakeka ukusukela ngoku. Hong Yan chassis emhlophe XJCM truck crane cab & nb ...Funda ngokugqithisileyo »
Wamkelekile kwiBauma CHINA 2020, inombolo yeXJCM yomnquba yi-E2.349
I-Bauma CHINA, umboniso omkhulu koomatshini bokwakha e-Asiya, ukumema ukuba uhlangane namandla okuvelisa e-CHINA kwihlabathi! I-24 -27 ngoNovemba 2020 i-XJCM iya kudibana nawe e-Shanghai New International Expo Centre, Booth No. E2.349 Funda ngokugqithisileyo »
Ukuqhubeka okutsha ithuba elitsha elitsha
Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co, Ltd. (XJCM) yasekwa ngo-2002. Ikomkhulu irejista yi-46 yezigidi RMB. Njengomvelisi wokuqala kunye nenkokheli yomhlaba we-crane, senza imveliso kunye nokuphuhlisa i-crane yomhlaba, i-truck crane, i-multifunction pipe laye ...Funda ngokugqithisileyo »
Xuzhou truck crane manufacturers bathetha malunga uxilongo drop jitter
I-crane boom boom luffing indlela ubukhulu becala isetyenziselwa ukutshintsha irediyasi esebenzayo, iyafuneka ukuthwala ubungakanani obuguqukayo, kwaye inyathelo lokumisa lizinzile kwaye linokuthenjwa, kwaye ihlala inesiphaluka esiguquguqukayo sesiphaluka sokugcwalisa. Xa ivalve yokusebenza ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukujongana nokusombulula ingxaki kumlenze wenqaba yendiza kunye nokuthintela
Ingxaki yokudubula i-crane yeselfowuni ngeendlela zokusombulula: enye kukutshintsha enye entsha; okwesibini kukulungisa nokulungelelanisa. Ukongeza, la manqaku alandelayo kufuneka aqatshelwe ngexesha lokudiliza kunye nokulungisa. 1. Ngaphambi kokucoca, qala ucoce umphandle we ...Funda ngokugqithisileyo »
Idilesi: NO.1 IDapeng Industrial Park, Isithili saseTongshan, eXuzhou, eJiangsu, China
Umnxeba: + 86-516-85055801
Inombolo kanomyayi: Ngama-86-18852120810